Afrika Atsimo : Finday, Fitaovana Vaovao Ampiasaina Hiadiana Amin’ny SIDA · Global Voices teny Malagasy
Afrika Atsimo : Finday, Fitaovana Vaovao Ampiasaina Hiadiana Amin'ny SIDA
Voadika ny 14 Septambra 2018 6:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, Português, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Manandrana fiadiana iray vaovao izao i Farika Atsimo amin'ny ady ataony hamongorana ny SIDA: ny telefaona finday. Fanentanana iray ho fisorohana no miomana handefa hafatra SMS faobe, maimaimpoana, isanandro, mba handrisihana ny Afrikàna Tatsimo hanao fitiliana ary hitsabo tena raha toa ha hita soritra ny fisian'ny aretina. [ Mitondra ho any aminà lahatsoratra amin'ny teny anglisy daholo ireo rohy rehetra]
Herinandro talohan'izao io tetikasa io, nomena ny anarana hoe Masiluleke na Project M, no nambara nandritra ny kaonferansa iray momba ny teknolojia vaovao Pop!Tech 2008 tao amin'ny fanjakan'i Maine, any Etazonia. Ny telefaona finday no ho ampiasainy, izay tena miasa be tokoa ao Afrika Atsimo, mba hiadiana amin'ny taha tena avo be amin'ny fitondràna ny otrikaretina VIH sy ny ràboka. Ny ampaham-potoana voalohany amin'ilay tetikasa dia hahafahana mandefa SMS eo amin'ny iray tapitrisa eo ho eo isanandro, mandritra ny herintaona, miaraka aminà hafatra an-tsoratra manainga ny olona mba hiantso ny foibe fanaovana fitiliana ny VIH na ny ràboka. Ireny hafatra ireny, mitovitovy amin'ny hoe “Misaotra indrindra, fa mba ivereno antsoina aho amin'ny laharana…”, dia tena fampiasa be tokoa manerana an'i Afrika.
Ny bilaogy White African [angl] no manome torohay vitsivitsy :
Mandray anjara amin'ilay tetikasa i “Gustav Praekelt – iray amin'ireo manampahaizana manokana fantatra amin'ny resaka fifandraisandavitra finday ao Afrika Atsimo. Ny habaky ny hafatra maimaimpoana ampiasàna tarehintsoratra 120 tafiditra anaty SMS iray ao Afrika Atsimo no ampiasaina. Manainga ireo olona mitondra ny otrikaretina VIH mba hizaha fahasalamana amin'ny fomba miafina izy io, mba tsy hiharan'ny fitsaratsarampoana mifamatotra amin'ny fanarahana fitsaboana”.
Ny tahotra fitsaratsarampoana, ary koa ny vaovao diso, dia aseho ho toy ny fanazavàna ny antony mbola mahavitsy dia vitsy ireo Afrikàna Tatsimo mandeha manao fitiliana sy manaraka fitsaboana. Olona manodidina ny 5.7 tapitrisa no tratra ao Afrika Atsimo, ary araka ny lazain'ireo fikambanana ao anatin'ilay tetikasa, 5 isanjato monja amin'ny mponina no nanao fitiliana. Hita ao amin'ny firenena ihany koa ny taha avobe amin'ny aretina ràboka, antony iray mampihombo ny aretina sy miteraka fahafatesana eny amin'reo olona mitondra ny atrikaretina VIH.
Ny Project M dia teraka mba hiadiana amin'ireo valanaretina roa ireo. Tetikasa nokotrehana tao anatin'ny fandaharanasa Pop!Tech Accelerator ary tohanan'ireo andrimpanjakana iraisampirenena, isan'ireny ny iTeach, ny orina Praekelt , Frog design, Nokia Siemens Networks ary ny National Geographic Society. Voamariky ny bilaogy “3 Sheep” fa porofoin'ny fampiasana ny telefona finday ao anatin'io fandaharanasa io hoe hatraiza ankehitriny ny fandraisana anjaran'ny finday ao anatin'ny fiainana isanandron'ireo ao Afrika Atsimo, ary ampiany hoe:
“Marobe ireo firenena no tsy manana tambajotrana telefona finday ho toy ny fitaovan-tserasera ho an'ny daholobe. Raha fahiny, ireo media hafa, toy ny fampielezampeo, no mety ho nampiasaina ho an'ity fandaharanasa ity, saingy porofoin'ny tetikasa ao Afrika Atsimo ny lanjan'ny fampiasana izay fitaovana rehetra azo ampiasaina mba hanamapiahana ny torohay.”
Tsy io no voalohany amin'ny karazana tetikasa toa azy ao Afrika Atsimo. Saingy tsipihan'ireo mpanorina azy fa io no manandanja indrindra raha resaka hadirinà hafatra momba ny fahasalamàna. Ankehitriny, toa tontosan'ilay tetikasa ihany ny fanomezantoky nataony. Nandritra ireo andrana fanentanana, tafakatra avo telo heny ny salanisan'ny antso isanandro ao amin'ilay antso nosokafana ho an'ny AIDS Helpline ao Johannesburg. Raha, taorian'ny nanombohana azy tamin'ny fomba ofisialy, voamarina ireo vokatra ireo, mety ho azo averina vokarina any amin'ny faritra hafa ao Afrika io lasitra io.
ahellgeth, tao anaty fanehoankevitra iray tao amin'ny lahatsorany, ao amin'ny bilaogy African Globalization, dia mahita fahafahana betsaka azo sintonina avy amin'io tetikasa io.
“Fitaovana iray goavana fanapariahana hafatra mafonja ho an'ny daholobe ny fampiasàna ny teknolojia. Ny fampoiasana ny SMS dia ahafahan'izay maharay izany mamaky sy mamerina mamaky ilay hafatra ao anatin'ny findainy, tsy toy ny hafatra ampitaina amin'ny alàlan'ny feo na ny sombin-taratasy zaraina. Amin'ny ankapobeny dia roa andro no ijanonan'ilay SMS ao anaty faritra natao handraisana hafatra. Afaka jerena sy averina vakiana. Heveriko fa hahasarika tokoa ny sain'ireo maharay azy ny hafatra, ary hanosika azy ireo hanaraka ny torohevitra nomena.…”
Dave, ao amin'ny Design in Africa dia maminavina hoe ho fahombiazana ilay fanentanana :
“Mikitika olana iray goavana ilay izy, mitondra vahaolana tsotra, mora takarina, voavelabelatra tsara tamin'ny fametrahana miaraka ireo loharanon-kery ananan'ireo rehetra mpiaramiasa. Azo tsapain-tànana ny tombontsoa azon'ireo mpisitraka azy sy ireo vondrom.piarahamonina mpisitraka azy, ary ilay SMS dia maimaimpoana ho an'ireo mahazo azy. Hevitra mamiratra.”
Fa ilay vehivavy bialogera lablady, ao amin'ny Wise Advice, mihevitra fa manelingelina ny hoe teknolojia lasa maka ny toerana fototra amin'ny ady atao amin'ny VIH/SIDA. Hoy izy :
“Fotoana tahaka ny inona moa no nanaovan'ny fiarahamonina ny telefaona finday ho azon'ny rehetra idirana sy hahasarika ny mason'ireo vahoaka mahantra, ianjadian'ny otrikaretina VIH, ary amporisihany ve ny olona hividy telefaona raha tokony ho ny fimailo? Toa hita ho mifanohitra ny hoe ny teknolojia no lasa mpivoy voalohany ny fanentanana iray izay, taminà fotoana iray, mety ho vokatra azo avy aminà fanetsehana faobe ny mpara-belona mba hanao fitiliana sy fanabeazana. Angamba ianareo hitsara ahy ho be ngetsana, saingy manontany tena aho amin'izay antony nahafahan'ny vahoaka iray manontolo nanana telefaona finday alohan'ny fanànana politika mahomby momba ny fahasalaman'ny daholobe, ho anà aretina iray izay azo sorohana tsara.
Catherine Forsythe, ao amin'ny bilaogy DogReader, dia manampy fa arakaraky ny handehanan'ny fotoana, mety horaisina toy ny “hafatra tsy iriana momba ny fahasalamàna” ireo hafatra voaray.
“ Ny mety ho fanontaniana dia ny hoe ‘hatramin'ny rahoviana io fomba fiasa io no hahomby ?”.Rehefa avy mamaky voalohany ilay hafatra, ireny hafatra momba ny fahasalamàna ireny dia azo fafàna malaky tsara mihitsy, tsy toy ireo hafatra hafa tsy niriana”.
Mametraka fanamby ny “Projet M” hoe tsia. Ireo dingana manaraka amin'ilay tetikasa dia hitodika amin'ny fanapariahana ireo fitiliana isantokantrano, ny fampiroboroboana ireo foibe virtoaly afaka antsoina ary ny fanekena / fandraisana ireny hafatra ireny mba hanomezana torohevitra ho an'ireo izay tsaboina noho ny aretina SIDA.
Sary Cell Phone Close Up avy amin'i JonJon2k8 tao amin'ny Flickr.